Semalt - कसरी cryptoLocker मालवेयर आक्रमण बाट व्यापार लाई बचाउन?
ह्याकरहरू र आक्रमणकारीहरूले उनीहरूको अपरेटेशनको विधिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरिरहेका छन् किनकि SEO र प्रवृत्ति र नवीनताहरू निरन्तर कार्यान्वयन भइरहेका छन्। वेबसाइटहरू र अनलाईन व्यवसायलाई आक्रमण गर्नबाट मालवेयर रोक्नको लागि पहिले प्रयोग गरिएका प्रविधिहरू र उपकरणहरू हाल काम गरिरहेका छैनन्। ट्रोजन भाइरस अन्त्य प्रयोगकर्ता वेबसाइटहरूमा प्रचार गर्ने एक मालवेयर हो।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक एन्ड्र्यू डायहानले मालवेयरबाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने बारे उपयोगी विचारहरूको एक नजर राख्दछ।
कम्प्युटरका अन्तिम प्रयोगकर्ताहरूलाई कमजोर आक्रमणबाट जोगाउन थुप्रै कारकहरू अगाडि राखिएको छ, सार्वजनिक इन्टरनेट प्रयोग गर्दा सतर्क रहँदै र नि: शुल्क सफ्टवेयर अनलाइन डाउनलोड गर्दा वकालत भइरहेको छ। मालिसियस आक्रमणकारी द्वारा ह्याक हुनबाट जोगिन, प्रीमियम एन्टि-मालवेयर डाउनलोड र स्थापना गर्न आवश्यक आवश्यकता छ। नि: शुल्क एन्टि भाइरसहरू सजिलै अनलाइन उपलब्ध छन्, तर प्रीमियम सफ्टवेयरमा मानक र प्रीमियम प्रोग्रामहरूको तुलनामा थप लाभहरू समावेश छन्।
रेनसमवेयर, जसलाई क्राइप्टोलोकर पनि भनिन्छ, धेरै अनलाइन कारोबारलाई अहिले र त्यसपछि असर गरिरहेको छ, परिदृश्य जुन धेरै कम्पनीहरूलाई परिचालन जोखिममा पोष्ट गर्दैछ। CryptoLocker भाइरस एक मालवेयर रणनीति को रूप मा मानिन्छ कि कम्प्यूटर अन्त प्रयोगकर्ताहरू सुरक्षा प्रणालीमा उनीहरूको सहमति बिना चुपचाप प्रचार गर्दैछ।
किन क्रिप्टोलोकर भाइरस अरु भन्दा फरक छ?
ट्रोजन परिवारबाट भाइरस भएको कारण, र्यानसमवेयरले तपाईंको पीसीमा तपाईंको सिस्टम सुरक्षा कोडहरू भगाएर प्रचार गर्न काम गर्दछ। तपाईको कम्प्युटरमा स्थापना भएपछि, CryptoLocker ले मालवेयरको अन्य प्रकारहरू जस्तै ट्रोजन भाइरसको प्रवेश अनुमति दिन्छ। CryptoLocker एक प्रकारको हो किनकि यसले तपाईंको पीसीको पूर्ण नियन्त्रण पाए पछि निश्चित डलरको माग गर्दछ।
ह्याकरहरूले तपाईंको पीसीमा मालवेयर स्थापना पछि तपाईंको गोपनीय जानकारी र प्रमाणहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दछ। अधिकतर रूपमा, आक्रमणकर्ताहरूले तपाईंको क्रेडिट कार्ड जानकारी र खाता पासवर्ड तपाईंलाई फिर्ता माग गरिएको नगद भुक्तानी गरेपछि फिर्ता गर्दछन्।
कसरी CryptoLocker भाइरस तपाइँको वेबसाइट को प्रभाव बाट रोक्न को लागी
तथ्या .्कहरूसँग यो छ कि ह्याकर्सलाई भुक्तान गर्नका लागि हकि being गर्ने र पर्याप्त पैसा प्रयोग गर्ने परिणाम स्वरूप धेरै उद्यमहरू व्यवसायबाट बाहिर जान्छन्। सुरक्षा, एक शीर्ष प्रदर्शन सुरक्षा समाधान कम्पनी, हैकर्स र मालवेयर व्यापार वेबसाइटहरु मा प्रचार शीर्ष शीर्ष समाधान प्रस्ताव गरेर लड्न अगाडि भएको छ। सेक्युरन्स कम्पनीले स्पाम ईमेलहरू फिल्टर गरेर र मालवेयर र उपकरणहरूको नयाँ संस्करणहरू प्रयोग गरेर मालवेयरलाई तपाईंबाट रोक्नको लागि प्रयोग गरेर वेबसाइट सुरक्षा समाधानहरू प्रस्ताव गर्दछ।
सुरक्षा कम्पनीले यो सुनिश्चित गर्न काम गर्दछ कि IP ठेगानाहरू तपाईंलाई ईमेल पठाईएको सुरक्षित छन् र भर्खरको heuristic टेक्नोलोजी प्रयोग गरी खतराहरू र मालवेयर पत्ता लगाउन वास्तविक-समय स्क्यानहरूको तालिका गर्दछ। सिक्युरेंस प्रोफेश्नसका अनुसार, ह्याकरहरूले पीसी प्रयोगकर्ताहरूको अभिलेख राखिएका फाईलहरू प्रयोग गरेर पहुँच पाउन सक्दछन्। संग्रहीत फाईलहरू प्राय: वेबसाइट र संगठन रणनीतिहरूमा क्राइप्टोलोकर प्रचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
किन आफूलाई क्रिप्टोलोकरबाट जोगाउने?
तपाईंको अनलाइन सुरक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै ट्रेंडहरू परिवर्तन भएको छ नवीनता र सृजनात्मकताको कारण हेकरहरूको प्रयासको परिणाम स्वरूप। मालवेयर आक्रमणहरू बजारमा प्रत्येक वर्ष घाटाबाट ग्रस्त हुने परिणामस्वरूप व्यापार बन्द हुन गएको छ। ट्रोजन भाइरस र मोबाइल आक्रमणको तुलनामा मालवेयर आक्रमणहरू घातक मानिन्छ। राम्रो कुरा के हो भने, पेशेवरहरू र आईटी विज्ञहरूसँग यस विषय छ किनकि उनीहरूले व्यवसायलाई नोक्सानबाट जोगाउन एन्टी-मालवेयरको नयाँ संस्करणहरू विकास गर्दैछन।
मालिसियस आक्रमणकारीहरू ह्याक हुनबाट जोगिनका लागि, तपाईंले सफ्टवेयरको नयाँ संस्करणहरू र क्रिप्टोलोकर एन्टि-मालवेयरलाई भाइरस योजनाहरू ब्लक गर्नका लागि तपाईंको व्यवसायलाई प्रभाव पार्नु पर्छ। तपाईले हरेक वर्ष लगातार नोक्सान भोग्नुपर्दैन। तपाईंको वेबसाइट सुरक्षा ह्यान्डल गर्न पेशेवरहरू राख्नुहोस् र मालवेयर र भाइरसहरूलाई रोक्नुहोस् तपाईंको अनलाईन व्यापार अपरेटहरूलाई असर गर्नबाट।